トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Horukon Works
Kana iwe usingazivi zvakanaka, mumwe nepachinko yokumusoro iri Horukon rino, zvinoita sokuti vamwe vanhu inofungidzirwa kuva pamutemo, zvakadai kure, chepakuvamba hausi muchina kuti chinhu chakadai. The Horukon, ndiye chidimbu kubva Hol kombiyuta. Achitaura
zvokuita muchina yacho, pane zviviri zvinangwa nehasha akakamurwa. Uye kuti akasvinudzwa vakanwa chakaiswa aggregating patafura data, zvakadai rokutengesa uye kwakakomba Mubereko muchibereko, zvichakufambirai kukwira richiona pamusoro kubiridzira. Muchidimbu, The Horukon, zvichava kuti muchina kuti Rinotarisira mashoko. Chokutanga, ndiwo data, muchina nokuti vakanwa vakasimudza Data kuna Horukon kunge yakaiswa rimwe papuratifomu chete. Kudhonza wiring kubva
mira, icho mashandiro kuti akwire pamusoro Data nawo kubatanidza kuti muchina. Uya date ndechokuti kumusoro, uye kutengesa uye kwakakomba mubereko neimwe tafura, nhamba kutyaira kwairi, humboo hunodiwa bhizimisi, akadai bhora chikwata mutengo kuti rokutengesa kune vamwe, Horukon ari agamuchira mureza patafura, zvicharangarirwa vakanwa kumusoro-zvechokwadi nguva .
kwete mumwe nomumwe data, chaizvo Data kana mashoko uye muenzaniso chacho Unit yava, kuva kuonekwa kuzvitoro yose mashoko.
Sezvo mashoko anouya kuna-chaiye nguva, dambudziko, zvakadai seapo pane kushayikwa wiring uyewo yava zvinogoneka pakarepo cherechedzai. Kwakadaro Sales data, tichitarisa chaizvoizvo kuita bhizimisi, hamungandiurayi zvakakodzera chose mashoko.
kuti nhamba iyi yakavakirwa, ndinofunga basa seanotevera zuva wezvipikiri kugadziriswa uye kurongwa. Mune mamwe maindasitiri, ndinofunga kana pasina kutengesa umboo rakatevera bhizimisi urongwa haina chakavakwa, asi zviri pamwechete nepachinko yokumusoro. Apo
hapana data, bhizimisi iri hamungavatongi kukwanisa zvachose. Sezvo vachiti vari
mumigwagwa, kana anogona kudzora pa mu Horukon, mupepa akafanana nesu akasununguka kudzora kana Uchikome okutengesa chinangwa haina vakapakata.
※ Zvisinei, Kunzwa Hurukuro nepachinko parlors kakawanda kushandisa Horukon kuti takashongedzerwa pamwe yakadaro mabasa. Zvinonzi kuenda andobata kuti zvakanakira chokwadi ndechokuti Horukon kubatwa nzira.